Waamiicha Atatama Haawwassa Oromoo fi Media Oromoo hundaaf !!
Diini Maqa waaqayoon walda Amanta keessatti Oromoo milliona shantama (50) irratti maqa baleesuu, salphisuu fi xiiqeesuu irra darbe Kale Hiwot, Mulu Wongel irra Gara Ortodoksiti darbe Ololi hangana hin jeedhamne Oromoo irratti deema jira.
Waldan Waqeeffaana Oromoo ibsa midhama Oromoo hin madalee fi hamilee Oromoo cabee fayyisuu hin dandeenye basuun rakkon jiru furameera jeechun irra darbun isaa siiri miti. Dhimmi kun kan waqeeffataa qoofa miti dhimma Musilima Oromooti, Dhimmaa Kiristiyan Oromooti, Dhiimma Ortodokssi Oromooti Dhiima Waqeefataa Oromooti, Dhimmii kun keessati dhimma Qeerro Oromoo fi ijoollee Oromoo Hora Arssadi Bushoftu irratti dhumteti.Dhiimii kun dhiimmaa dhaabbilee Oromoo fi Haawwassa Oromoo hundati. Dhiima Oromoo hunda keenyati. Kun waan akka qoosati ilaalamuu miti.
Dhaabbileen Oromoo, Hawwassii Oromoo median Oromoo, Waldaleen Amanta Oromoo hundi bakka jiran sagalee isaan ol fudhan dhageesisuu qabu. Waldan Makaneyesus fi Waldan Evangelical Kirstiyan Oromoo Adunya luboon Oromoo Adunya irra jiran guyya isaan gadi ba'aan Uummata isaan namni dhunfaa salphise waaqayooti iyyatan fi mediati gadii ba'aan dubatan hara’a. Abbootin Seera Oromoo yakkamtoota Oromoo maqa xuuresan kana akkata seera Adunya fi seera Ethiopia caqasuun Himata mana murtitif qoophesani akka dhiyeefatan gaafana.
Mootumman naannoo Oromiyya uummata Oromoo inni bulchan jira jeedhu yeroo Kashalaben lubaa ofiin jeetu Walda Kale Hiwot fi Ortodokssi Ethiopia keessti uummata Oromoo Milliona shantama (5O) salphiiftu ilee irratti falmaachuu dhabun maluma OPDO fi Mootumma nannoo Oromiyya tajjabii fi Madali hamma keessa galcha. Kan nama dhunfa himatani seerati dhiyeesuu hin dandessan yoo ta'ee Oromoo Millona shantama (50) bulchuuf hamilee malii qabdu? Namni Oromoo Milliona shantama (50) xiiqeese yoo seerati hin dhiyyatu ta'ee Ogannoon Oromoo fi Ijoolleen Oromoo kuma dhibba tokko (100, 000) mana hidha TPLF keessatti dhumaa jiraniif ga'een OPDO malii? Kanaafi Waldan Kale Hiwot, Mulu Wongel fi Ortodoksin Ethiopia Oromoo Maqa xuuressa jira tajaajila Oromiyya keessatti akka hin lane goodhamani seerati akka dhiyyatan goochun OPDOn mirga Oromoo kabachisuuf dirqama isaa ba'ee saba isaaf wabii ta'uu qaba jena.
Kun hundi ta'uu banan garuu Qeerroon Oromoo walgurmeese warra Oroomoo xiqeesuu bakkuma isaan jiranti tarkanfi isaa dhumma irratti fudhachuu qaba. Murten Awadayti Abdi Idris irratti fudhatame diina Oromoo bakka jiru irratti fudhatamu qaba.
Luboon Oromoo nama shani hanga kudhani ta’an maqaa xureessiin saba Oromoo irra ga’a jiru hedduu kan isaan gadiisise ta’u isaa ibsuudhan tuumsa sabaa Oromoof qaban media Oromoo kan akka SBO,OMN, ONN,OROMOO TV Minisootaa fi Toroonto irratti dhiyyaatan Uummata isaaniif dhamsa dabarsuuf qophii waan ta’anif warrii mediati namoota kana dhiyyessuu dandessan akka nuu qunnamtan kabajan isiin gaafana.
Ernest Claesstraat 10 GLV, 2050 Antwerpen Belgium
GSM +32 488 47 93 60 or 0032465231063
skype gadaa.oromoo , facebook gummi paarlamaa Oromoo
Email: opc.gpo@gmail.com personal email getachew.jigi@gmail.com